Iwo gumi Mirairo Yeazvino Webhu Kubudirira | Martech Zone
China, Kukadzi 15, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kutaurirana kwakakosha seManeja Chigadzirwa nekambani yesoftware. Munguva pfupi yapfuura, ndakashanda uye ndikaburitsa inotevera "mirairo" yemazuva ano webhu kusimudzira kuti igovaniswe kuzvikwata zvedu. Ose anovandudza webhu ano (kana kunyorera) anofanirwa kuteedzera iyi gumi mirairo.
Kune zvinoshamisira kuronga mazwi izvo zvinogona kukandirwa kunze kweizvi zvese; zvisinei, chinangwa changu chaive chekuisa izvi zvakafanana mazwi evanoshanda ve software (uye kunyange iwe) unzwisise.
Gara uchitsigira 99% yevanoshandisa internet, zvisinei nebhurawuza, shanduro yebrowser, kana sisitimu inoshanda. Chinja zvinoenderana uye gara wakagadzirira nekuburitsa beta.
Gara uchishandisa XHTML kodhi inoenderana neyekushandisa, chirevo neiyo DTD uye yekuyambuka-browser inowirirana Cascading Style Sheets kune ese marongero masitayera uye ekushandisa mifananidzo.
Nguva dzose mareferenzi zvinyorwa uye tambo kuburikidza nereferenzi zvinhu zvinotsigira chero akaiswa maitiro uye hazvitombodi kuvaka.
Nguva dzese mareferenzi misi uye nguva muGMT iyo inobvumidza chero mushandisi kugadzirisa izvo zvavanoda.
Gara uchivaka chinhu chekubatanidza kune ese maficha.
Gara uchivaka kune RFC zviyero (mavara emaimeri, maemail eHTML, email kero, domain mareferensi, nezvimwe)
Gara uchivaka zvine mutsindo. Kana paine zvinopfuura sarudzo imwe chero kupi mukushandisa, iwe unofanirwa kukwanisa kuwedzera zvimwe pasina kuda kuvaka.
Kana chikamu chinopfuura chimwe chete chekushandisa chikachiita, zvikamu zvese zvechishandiso zvinofanirwa kureva poindi imwechete.
Usambofa wadzokorora zvaunogona kutenga uye gara uchigadzirisa maitiro edu kutsigira zvawatenga.
Kana vashandisi vachigona kuzviita, saka tinozvitsigira. Kana vasingakwanise kuzviita, tinofanirwa kuzvisimbisa.
Chii chekutenga iyo Geek ine zvese?
Feb 17, 2007 at 5:54 PM
Agreed. Zvisinei zvichibva pane imwe pfungwa 7. Ndinotenda kuti kunyange mukugadzirwa kwewebhu, data, kumiririra (GUI'S) uye bhizinesi logic inofanira kugara yakaparadzaniswa zvichienderana neMVC model based approach.
Izvi zvichawedzera, mhando yesoftware, uye scalability.
Kukadzi 17, 2007 na1:50 PM
Ndatenda, Andreas! Iwowo ndiwo mweya we#7 - yako yekutaura inoshambadza zvakanyanya kujeka.